UMHLA WOKUKHUTSHWA KWEHOCUS POCUS 2, ICAST, IPLOTI KUNYE NAYO YONKE INTO EKUFUNEKA UYAZI - IIMUVI
Umhla wokuKhutshwa kweHocus Pocus 2, iCast, iPloti kunye nayo yonke into ekufuneka uyazi
Oodade baseSanderson baceba ukubuya kwakhona, kwaye abalandeli beHocus Pocus franchise banomdla
Oodade baseSanderson baceba ukubuya kwakhona, kwaye abalandeli beHocus Pocus franchise bayilindele ngolangazelelo. Ukulandelelana kwiklasikhi yeDisney ekhutshwe ngo-1993, iHocus Pocus 2 ngoku iphantsi kwemveliso ngokusemthethweni. I-Disney ityhile isicwangciso sokuthatha i-movie ngokulandelelana kwi-2019.
Iya kukhutshwa nini iHocus Pocus 2?
IHocus Pocus 2 iya kwenza ukukhutshwa kwayo ngokusemthethweni kwiDisney +. Nge-10 kaDisemba ngo-2020, kumboniso woSuku lwabatyali zimali beDisney 2020, kwaqinisekiswa ukuba iHocus Pocus 2 iyenzeka; Nangona kunjalo, azikho iinkcukacha ezininzi ezityhiliweyo malunga nemveliso. I-tweet ka-Bette Midler ngoMeyi 20, 2021, esithi Sistaaaahs! Yiminyaka engama-300… Kodwa SIBUYILE! uqinisekisile ukuba umboniso bhanyabhanya uza kukhupha kungekudala. Kucwangciselwe ukukhutshwa kwisiqingatha sesibini se-2022. Nangona kunjalo, ukuza kuthi ga ngoku, akukho mhla wokukhutshwa unikezelwe kumdlalo bhanyabhanya.
mangaphi amaxesha esherlock akhoyo
Ngubani kwi-Cast of Hocus Pocus 2?
Emva kokuba imovie yenziwa yaluhlaza ngokusemthethweni ngo-2019, kwakungaqinisekiswanga ukuba likhona na ilungu langaphambili eliza kwenza imbuyekezo. Nangona kunjalo, uninzi lwabalandeli luqinisekile ukuba imovie ezayo ayisiyondlela yokulibaziseka yokuqalisa kwakhona ngokupheleleyo. UJen D'Angelo ubhala iskripthi somdlalo bhanyabhanya kwaye wanikwa umsebenzi wokuzisa oodade bobugqwirha abathathu kwifilimu yasekuqaleni ukuya kwiindima zabo kwakhona.
Ngelixa kuqala, uAdam Shankman wayezimisele ukukhokela imovie, ishedyuli yakhe yayingamvumeli ukuba athathe imovie. Endaweni yoko, wanika u-Anne Fletcher isikhundla, kwaye u-Adam uza kuqhubeka nokusebenza njengomvelisi olawulayo we-Hocus Pocus 2. UKenny Ortega, owayekhe wangumlawuli we-movie yokuqala emva ngo-1993, wathi kudliwanondlebe Ucele ukujoyina iprojekthi yefilimu ezayo. U-Anne Fletcher wongeza ukuba umboniso bhanya-bhanya ufuna ithamo lokuhleka ngakumbi kunangaphambili, kwaye unovuyo olungakumbi lokuzisa abathakathi kwizikrini kwakhona.
wonder woman 3 2023
Phakathi kwamalungu enza imbuyekezo nguBette Midler njengoWinifred Winnie Sanderson. USarah Jessica Parker naye ubuya njengoSara Sanderson. Ukulandela kwakhe i-tweet kuMidler's uthi ukulungele ukuqhuba i-amok, amok, amok. Nangona kunjalo, udade wegqwirha wesithathu, uKathy Najimy, njengoMary Sanderson, akakaqinisekisi ngendima yakhe. Ngaphandle kwezi, akukho zinkcukacha zifumanekayo kwiHocus Pocus 2. Nangona kunjalo, uDoug Jones, odlala indawo kaBilly Butcherson, uthi angazibandakanya nabalingisi ukuba abasebenzi baceba ukubuya kwakhe.
Yintoni iPlani yeHocus Pocus 2?
NgoFebruwari kulo nyaka, uBette Midler waqinisekisa ukuba iskripthi sithathe imilo yaso, kwaye ngekhe kuthathe ixesha elide ukungena kwimveliso. Ebonisa isixeko sehlabathi sale Salem, abafazi abathathu abancinci, ngengozi, babuyisele oodadewabo baseSanderson ebomini kwakhona. Aba bafazi kufuneka babone indlela msinyane kunelixa lokumisa eli trio lilambile abantwana lamagqwirha abavuswe ngengozi kwaye ngoku benzakalisa kuluntu. Emva kokufunda iskripthi, i-cast iqinisekisile ukuba bachukumisekile yindlela i-Disney eqale ngayo uvuko lwamagqwirha kwiminyaka engama-27 kamva. UMidler uthe bonke bavumile ukuba iyelenqe libukeka lihle. Yiyo loo nto abalandeli belinde ukwazi ukuba kuya kwenzeka ntoni kumdlalo bhanyabhanya ohlekisayo emva komgama omde kangaka. Ukuza kuthi ga ngoku, akukho trailer ifumanekayo kwifilimu ezayo.
iphuma nini abaguquli 7
Ukuba awubukelanga okanye ufuna ukuvuselela inkumbulo yakho ngemovie yoqobo, Hocus Pocus, ungayibukela kwiDisney +. Ifilimu ezayo iya kuqala kwiqonga elifanayo lokusasaza kwiAtumn 2022.
Akukho Mdlalo Akukho Xesha loBomi loMhla wokuKhutshwa kweCandelo, iCast, iPloti kunye nayo yonke into ekufuneka uyazi
Rick and Morty isizini 4 Isiqendu 6 Umhla wokuKhutshwa kunye neNqwelomoya ebonakala ngathi ityhilwe ngaMalungu [eCAST], aBanomdla [ABANGABONI], iiBond ezintsha kunye nezinye ezininzi.
UHenry Cavill Wophula Ukuthula 'Ngomlumbi' Enika Impendulo Efanelekileyo Ethulisa Intiyo
Indlu yeNyoka yeXesha lokuQala uMhla wokuKhutshwa, iSamente, iPlani, iTrailer kwaye Yintoni Esinokuyilindela Kwimbali?
Ixesha leHaikyu 4 Amarhe malunga nokuCinywa kwayo, iindaba ezizayo, amathuba, uhlaziyo lwamva nje, isandi kunye neploti omele uyazi
UGeorge R.R Martin uza kuyikhupha nini iMidlalo yeZihlalo zobukhosi imimoya yencwadi yasebusika, zithini iingcamango zabalandeli?
INetflix ejongene nengqumbo yeNetizens yokususa amaDerry amantombazana amaXesha ama-2 kwiintsuku ezine zokuKhutshwa emva kokuKhutshwa
Liza kubakho nini uluhlu lwabamnyama ixesha lesi-5 kwi-Netflix
Umhla wokukhutshwa kwe-movie karen ka-2021
uthixo utya ixesha lesibini
Ukunyuka kwekhuselo lexesha lesi-2 umhla
Umhla wokukhutshwa kwemiboniso bhanyabhanya omnandi harry potter
Lifikile nini ixesha lomtoli 7 kwi-Netflix